Colaadda Suuriya oo maanta laga shirayo - BBC Somali
Colaadda Suuriya oo maanta laga shirayo
Kooxda caalamiga ah ee taageerida Suuriya, oo ay ku jiraan dalalka Mareykanka, Ruushka, Britain, Iran, Turkiga, Midowga Yurub iyo dalal Carab ah ayaa maanta kulan ku leh magaalada Vienna si ay uga shiraan colaadda dalkaasi ka taagan.
Kulanka ayaa waxaa si wadajir ah u shir gudoomin doona wasiiradda arrimaha dibedda ee Mareykanka iyo Ruushka.
Xoghayaha arrimaha dibedda ee Mareykanka, John Kerry, ayaa sheegay inuu rajeynayo in la xoojiyo xabbad joojinta aan cagaha badan ku taagneyn ee ka jirta qeybo ka mid ah Suuriya.
Saraakiisha ayaa sheegaya in ay rajaynayaan in shirka maanta uu dib usoo nooleyn doono wadahadaladii nabadda ee joogsaday.
Wadaxaajoodkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Geneva ayaa lagu kala dareeray bishii April, ka dib markii ay ka baxeen mucaraadka oo ka cabanayay weerarrada joogtada ah ee lagu hayo.
Diblomaasiyiinta reer galbeedka ayaa doonaya in la xoojiyo xabbad joojinta aan cagaha badan ku taagneyn ee ka jirta deegaannada qaar, si gargaar bani'aadannimo loo gaarsiiyo dadka u baahan, isla markaana loogu dhiirigeliyo mucaaradka in ay miiska wadaxaajoodka kusoo laabtaan.
Waxa ay sheegayaan in waxbadan ay ku xiran yihiin qaabka uu Ruushka cadaadis u saaro saaxiibkiisa Bashar Al Assad, madaxweynaha Suuriya.